Ka taxaddar khiyaanada Qaansheegadka Diiwaangelinta Diiwaangelinta PayPal | Martech Zone
Ganacsi ahaan, waxaan badanaa layaabay inta dacwadood ee igu soo dhacda taas oo aniga ila yaabisay. Adduun ka mid ah barnaamijyada jaban, macaamiisha yar-yar, iyo tiro badan oo ah hababka lacag-bixinta, waa inay faa'iido badan u noqotaa inuu noqdo khayaano internetka maalmahan.
Saaxiibkeygii wanaagsanaa, Aadam, wuxuu saaka ii soo gudbiyay khiyaano qaansheegasho oo uu isagu ka helay Hanti Ma-guurto CRM. Si ka duwan sida emaylka loo yaqaan 'phishing phishing', oo ah halka qofka wax dirayaa ka been abuurto cinwaanka e-maylkiisa, kani wuxuu dhab ahaan u soo diraa qaansheegadka PayPal - diraha sharciga ah
Ilaa iyo intaad ku kaydsan tahay asturnaanta bogaggaaga, qof kastaa wuu samayn karaa Whois fiiri oo aqoonsado cinwaanka emaylkaaga iyo taariikhda uu dhacayo diiwaangelinta domainkaagu. Isticmaalka PayPal, waxay abuuraan qaansheegasho dhab ah waxayna kuugu soo diraan nidaamkooda adiga. Xaaladdan oo kale, waxay xitaa ku calaamadeeyeen qaansheegta GoDaddy - diiwaan-hayaha.
Haddii aad tahay shirkad weyn, tani waxay si fiican u dhex mari kartaa oo lagu siin karaa lacag iyadoo aysan ahayn adeegga diiwaangelinta domainka dhabta ah. Markii uu Adam guji dhex maray, waxay ahayd cinwaan e-mayl Ruush ah oo loogu talagalay qaataha. Wuxuu ku soo wargaliyay PayPal waxaana rajeyneynaa in la xiray, laakiin tani wali waa wax dhib badan maxaa yeelay waa qaansheegad dhab ah oo ay soo dirtay adeeg dhab ah.
Waxay umuuqataa inay halkan kajirto fursad aad ufiican oo loogu talagalay adeegyada sida PayPal si loo abuuro heshiis udhaxeeya iibsadaha iyo iibiyaha inay dhab ahaan is yaqaanaan oo ay yeeshaan xiriir aamin ah trusted halkii PayPal si fudud loogu ogolaan lahaa qofkasta inuu u diro qof kale qaansheeg.
Tags: biilashadiiwaangeliyaha domainwarqad qaansheeg ahpaypalqaan-bixinta paypal